Hafatra avy amin’ny mpitandrina taorian’ny Tafika Masina oktobra 2021 – FJKM Ambavahadimitafo Hafatra avy amin’ny mpitandrina taorian’ny Tafika Masina oktobra 2021 |
« Misaora an ‘i Jehovah ry fanahiko ary izay rehetra ato anatiko misaora ny Anarany Masina . »(Salamo 103:1)
1/Isaorana ny Tompo Andriamanitra fa tontosa soamatsara ny Tafika Masina tany Isoavina Fiorenana. Mankasitraka antsika Sampana, asa, AFF, Mamre, Mpanohana rehetra, indrindra fa ny Fiangonana manontolo nanohana sy nitondra am-bavaka.
« Miorena tsara aza miova ary mahefà be amin ‘ny asan’ny Tompo fa tsy foana akory ny fikelezanareo aina ao amin’ny Tompo », 1Kor 15:58
2/Manentana antsika rehetra samy ho tonga eny Coliseum Antsonjombe hiombom-bavaka @fametrahana @ toerany ireo tomponandraikitra vaovao eto @FJKM. Mikatona ny Fiangonana fa eny avokoa isika rehetra ny ALAHADY 17 OKTOBRA 2021 izao @ 10 ora maraina.
Mirary ny fiadanan’ny Tompo ho amintsika rehetra.